Ikhwalithi Ephakeme Ngokwezifiso uthingo lwenkosazane olusobala lwe-PVC vinyl holographic hologram iridecent isikhwama sabesifazane sabesifazane efektri nabakhiqizi | Langhai
Igama lomkhiqizo Isikhwama sesandla sabesifazane esicacile se-PVC vinyl holographic hologram esicacile sabesifazane
Okubalulekile I-Holographic Sula i-PVC
Ubukhulu 0.3MM- 0.6MM, ngokwezifiso.
1. Sinikezela ngezinsizakalo ze-OEM. Sinezinhlobo ezingezansi zamasu ohlelo lokusebenza lwe-Logo. Singafaka ilogo yakho ezikhwameni, singakwazi ukwenza ngokwezifiso ilogo/ithegi elengayo/ ukupakisha okudayisa nezinye izinto.
● Ukuphrinta kwesikrini sikasilika
● I-Deboss /Emboss
● Ilebula elukiwe
● Uphawu lwensimbi
2. Sineqembu le-prefect sample masters, imiklamo yangokwezifiso eyamukelekile. Singakusiza ukuthi uthuthukise izikhwama ngokusekelwe ku-Artworks/Spec./Ref.Sample njll.
3. Singakuhlelela i-TEST uma unesicelo sokuhlola.
4. Ukuhlola Umuntu Oseceleni Kuyamukeleka futhi kwamukelekile!
Amandla Okukhiqiza 600000 izingcezu ukuphrinta ngokwezifiso ngenyanga
Ukupakisha Ipakishwe esikhwameni se-OPP, izingcezu ezingu-2000 zipakishwe ebhokisini
2. Kuthiwani ngezindlela zokuthutha?
Ngama-oda amancane, ungakhetha amazwibela alandelayo: UPS, FedEx, TNT, DHL, EMS. Ngomthamo omkhulu, ungathumela izimpahla ngomoya noma ngolwandle ukuze wonge izindleko.
3. Kuthiwani ngezindlela zokukhokha?
Samukela i-T/T, L/C ngenani elikhulu, futhi ngama-oda amancane, ungase usikhokhe nge-Paypal, Western Union, Moneygram, Escrow, njll.
4. Kubiza malini ukuhambisa ngomkhumbi ezweni lami?
Kuya ngezinkathi zonyaka kanye nabadluliseli abahlukene. Imali ihlukile enikezwa abadluliseli abahlukene, nangezikhathi zonyaka ezahlukene. Ungathintana nomdluliseli wakho omqokile noma nathi nganoma yisiphi isikhathi.
5. Yisiphi isikhathi sakho sokulethwa?
Isikhathi sokuhola ngobuningi sizoba yizinsuku eziyi-15-30 ngemuva kokugunyazwa kwamasampula, futhi idiphozithi isikhokhiwe.
6. Ngingakwazi ukuphrinta ilogo/ibhakhodi/ikhodi ye-QR eyingqayizivele/inombolo yochungechunge emikhiqizweni yakho?
7. Ngingakwazi uku-oda isampula ukuze sihlolwe?
Amasampuli azofakwa i-invoyisi ngamanani e-FOB x 2, kodwa azobuyiselwa uma usufake ama-oda futhi uhlangabezana nama-MOQ 500 ama-pcs ngesitayela ngombala ngamunye.
8. Ungakwazi yini ukwenza imikhiqizo yami ibe ngokwezifiso ezikhethekile?
Yebo, sinikeza isevisi ye-OEM ne-ODM.
9. Ungaqinisekisa kanjani ukuthi sizothola imikhiqizo enekhwalithi ephezulu?
Sinokuhlola kwe-QC kwangaphakathi, futhi uma ufuna, singase sihlole imikhiqizo eyinqwaba noma ihlolwe i-AQL inkampani yangaphandle.
I-Holographic Transparent Bag
Isikhwama se-Pvc Transparent Makeup Bag
I-Transparent Pvc Beach Bag
I-Transparent Pvc Shoulder Bag
I-Transparent Pvc Zipper Bag
Transparent Shopping Bag Pvc